Nhau - PE mizhinji-yakatenderera pombi extrusion mutsara
Pe mizhinji-yakatenderera pombi extrusion mutsara
PE yakawanda-yakatenderera pombi extrusion tambo inogona kuita 2, 3, 4, 5 materu emapombi neakawanda akakosha muchina mukomboni extrusion.
Zvekugadzirwa kwepombi-yakawanda pombi, iyo yakawanda marara, iyo yakawanda zvinhu, zvakanyanya kuomarara kugadzira. Matanho akasiyana anozovewo nemisiyano yakasiyana. Pamatatu mapaipi, pane mhando mbiri. ABA uye ABC zvinoda zviviri uye zvitatu single screw extruders kuti co extrude. Zvemidziyo, ABC yakanyanya kuomarara uye mutengo wemidziyo wakakwira zvakanyanya kupfuura ABA.
PE mizhinji-yakatenderera pombi inonyanya kushandiswa kumatunhu emvura nekudyara, kudiridza kwekurima, nezvimwewo kuburikidza nezvakasiyana zvigadzirwa uye zvidimbu, zvinogona kudzikisa mutengo, kuwedzera simba remuviri uye kuwedzera antioxidant.
Kune yakajairika yemubatanidzwa pombi yekugadzira mutsetse, iyo hombe chimiro cheakanyanya kushanda chinoumba pombi yekugadzira mutsetse ndeyekuita kwakanyanya nekuchengetedza simba Pasi pechirevo cheiyo yakafanana extrusion kugona, iyo sikuru iri idiki, simba rekushandisa rakadzika, uye saiti nebasa zvinochengetedzwa.
Zvichienzaniswa nenguva imwe chete yenguva imwechete, kuburitswa kwe60 / 30 zvakajairika single screw extruder inongori 100kg paawa, nepo iyo yekuwedzera simba yekukwira-kushanda 60/38 yakakwira-kugona imwechete screw extruder inopfuura 350 kg paawa, izvo zvakaenzana nekugona kwese kwematatu nehafu. Iko kushandiswa kwesimba ingori 2.8 nguva yeiyo yeakajairika extruder, uye iyo simba rekushandisa reshiyo inowedzerwa neinenge 25%. Iko kushandiswa kwesimba kwakaderedzwa zvakanyanya, iko kuita kwechigadzirwa kwakakwidziridzwa, uye nzvimbo yekugadzira yakaderedzwa zvakanyanya.
Pe yakawanda-yakaturikidzana pombi yekugadzira mutsetse inogona kuburitsa pombi dhayamita ye20-1200mm, uye iwo maratidziro eepamusoro-anoshanda-ega single screw extruder anowanzo kuve 50/38, 60/38, 75/38, 90/38120/38150/38. iyo yekuwedzera extrusion inokwana 200-1200kg / h, uye iyo extruder mota iri 55kw-550kw, kuitira kuzadzisa zvido zvevatengi vane akasiyana mapaipi madhivha.